Ogaden News Agency (ONA) – Shamsa Cumar iyo Ibraahim dheere midkoodee run sheeg ah
Shamsa Cumar iyo Ibraahim dheere midkoodee run sheeg ah
Posted by ONA Admin	/ July 6, 2011
Cinwaanka maqaalkan waxaa igu kalifay markaan akhriyay maqaal ay gabadha Shamsa ah ku qortay shabakadda kilil5 anigoo aad markii horeba ula yaabanaa koobka loogu magacdaray nabadda ee Ibraahim dheere uu ka gudoomay Cabdi iley.
Waxaa quraanka ku xusan inuu jiray nin wadaad ahaa oo reer banii israaiil ahaa oo Ilaahay intuu siiyay cilmi ugu dambayntii ka doortay duunyo oo sidaa ku mutaystay cadaab oo lagala mid dhigay eyga.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ – الأعراف : 175
Nin oday ah ayaa dad la yaaban arimaha Ibraahim dheer ku yidhi; war ninkan Haan ayuu madaxa la galaye iska day. Qisadii haanta ayuu ka sheekeeyay oo yidhi; nin inan-la-yaal ah ayay sodohdii markay dareentay inuu yarehe gaajoonayo xoolihiina barqa foof ku maqan yihiin ku tidhi; hooyow aan haantaa caanaha ciirta ah ee ku jirta furka xoogaa kuugu shubo. Inan-layaalkii oo xishoonaya ayaa ku yidhi; eedo waligayba ciir afkaa ma saarin, sababtoo ah waayadii hore ceeb ayay ahayd inay ragga cabaan ciirta. Islaantii oo yaxyaxsan ayaa iska tagtay. Xoogaa markay ka maqnayd ayuu damcay inuu afka ku yarehe xado inta aanay soo noqonin sodohdii. Haantii ayuu intuu kor u qaaday damcay inuu qudh-qudhiyo, balse intay ku soo fakatay ayay madaxa u gashay. Ninkii oo la dagaalamaya haantii inuu madaxa kala boxo ayay islaantii ku soo noqotay. Shaki kuma jiro inuu Ibraahim dheere ceeb dhex fadhiyo aduun iyo aakhiraba.
Ibraahim dheere iyo Cabdi iley hadda waxay isu jiibiyaan riwaayadda, maadaama ay xaqiiqsadeen inuu fashilay mashruuc beenaadkii ay ka iibiyeen KT Zinawi ee ahaa waxaa soo qulquli doona oo isa soo dhiibi doona shacabka Ogadenya oy horsocdaan wadaadada jimciyada doonka ah.
Shamso Cumar waxay sheegtay xaqiiqada ka jirta dalka iyo dhibaatada ay ku hayaan maxaysatada Cabdi iley dadka shacabka ah. Waxaan horey uga akhrinay dhibaatadii uu ku sameeyeen gabdhaha Jigjiga Guuleed Casoowe iyo maamulka Cabdi iley. Maqaalkan dambe oy cinwaan uga dhigtay gabadha – Damaanad nabadgalyo La’aanta deegaanka ka jirta – Waxaa ka mid ahaa meelaha ay xustay ee murugada leh;
( Dulmiga iyo dhibka ka jira degmooyinka, tuulooyinka iyo dhulka miyiga ayaa waxaa ka mida kufsiga ay ciidankani kula kacayaan gabdhaha. Waxaa had iyo jeer dhacda in ciidanku ay qasab ku kaxaystaan gabdhaha, waxay doonaana ku sameeya, iyagoo kuwa diidana u sameeya wanjal ay ugu magacdaraan inay taageersanyihiin kooxaha nabadiidka ah, kadibna laaya. Ciidankan ayaa had iyo jeer lagaga soo cawdaa inay xataa dumarka xaaska leh ee laqabo kafurtaan ragooda iyagoo ugu hanjaba in ay dilidoonaan hadii ufuriwaayaan haweenkooda.)
Marka aad akhriso qoraalada noocan ah ee ka tarjumaaya xaqiiqada dhabta ah ee Cabdi iley iyo kooxdiisa ay ku hayaan dadweynaha masaakiinta ah ee dumarka aadka u nugul ay ugu horeeyaan, eed aragto Ibraahim dheere iyo qaar wadaado sheeganaya oo uu sii horqaaday iyo farxadda iyo qosolka ka muuqda wajiyadooda, waxaad si dhab ah u xusuusan in la joogo waqtigii uu Rasuulka CS sii saadaaliyay. Qoraaga maqaalkaa marwo Shamso oo sii weadata waxay qortay;
(Guud ahaan deegaanka ayaa waxaan kajirin wax damaanad qaad nabadeed ah, qofkastaana wadnaha ayuu farta kuhayaa, wuxuuna sugayaa xiliga loo imandoono, haba u sii daraadaan dadka kunool magaalooyinka yaryar, tuulooyinka iyo miyiga. Waxaa meesha kabaxday kaladambayntii ka jirtay dagmooyinka iyo tuulooyinka, gaar ahaan gobolada ay colaadu kajirto, waxaa luntay damaanadii nabada iyo nolosha, dadkiina waxaa loolaynayaa gar iyo maag la’aan. Hadaba waxay dadku iswaydiinayaan yaa looga dacwoon karaa ciidankan anshaxoodu xunyahay.)
Ibraahim dheere wixii uu qarsan jiray ee ahaa nifaaqa ayuu Ilaahay banaanka soo dhigay Ilaahay ayaana ballan ku qaaday inuu kuwa noocaa ah fashilinayo markuu yidhi;
ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنّهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم